६ वाणिज्य बैंकसहित १३ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? - नेपालबहस
६ वाणिज्य बैंकसहित १३ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ?
| १६:५२:२५ मा प्रकाशित
२३ जेठ, काठमाडौं । आइतबार शेयरबजारमा १३ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च रहेको छ । यस दिन ६ वाणिज्यबैंकसहित १३ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च देखिएको हो ।
यस दिन नेपाल बैंक, नेपाल बंगलादेश, मेगा, माछापुच्छ्रे, प्रभु र कुमारीबैंकसहित १३ कम्पनको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो र नेशनल हाईड्रो, ज्योति विकास बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स, हिमाल दोलखा हाइड्रोको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ । यस दिन सबैभन्दा बढि नेशनल हाईड्राको शेयरमा खरिद माग आएको छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ५ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा ५ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ५५ हजार बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
यस दिन सबैभन्दा बढि नेशनल हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ३ लाख ३८ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा ३ लाख ३८ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा १ लाख ९४ हजार बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा ४ लाख १० हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । बैंकको शेयरमा ४ लाख १० हजार कित्ता खरिद माग आउँदा ३ लाख ३० हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
यस दिन लगानीकर्ता नेपाल बैंकको शेयरमा झुम्मिएका छन् । बैंकको शेयरमा ५ लाख ५५ हजार कित्ता शेयर खरिद गर्न लगानीकर्ता झुम्मिएका हुन् । कम्पनीको शेयरमा ५ लाख ५५ हजार कित्ता शेयर माग आउँदा बिक्री आदेश ३ लाख ३० हजार कित्ता रहेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । बैंकको शेयरमा २ लाख १७ हजार कित्ता खरिद माग आउँदा १ लाख ८ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
नेपाल बैंकको शेयरमा २ लाख ६७ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । २ लाख ६७ हजार कित्ता खरिद माग रहेको बैंकको शेयरमा १ लाख ३२ हजार बिक्री आदेश रहेको छ ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकको शेयरमा २ लाख २५ हजार, मेगा बैंकको शेयरमा ३ लाख १३ हजार, ज्योती विकास बैंकको शेयरमा २ लाख २६, कुमारी बैंकको शेयरमा २ लाख २८ हजार, लुम्बिनी विकास बैंककको शेयरमा ३ लाख ३८ हजार र आइसीएफसी फाइनान्सको शेयरमा २ लाख १९ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
बाढीले पक्की पुल क्षति, सडक सम्पर्क टुट्यो ७ मिनेट पहिले
प्रदेश सरकारको बजेटमा यसपालि घुमौँ कर्णालीको गुरुयोजना १२ मिनेट पहिले
पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास १७ मिनेट पहिले
पहिरोले करिडोर अवरुद्ध २० मिनेट पहिले
सडकका किनारामा तरकारी बिक्री गर्दै महिला २४ मिनेट पहिले
बेनी बजार कटानको उच्च जोखिममा २७ मिनेट पहिले
के भएको हो झलनाथलाई ? ३८ मिनेट पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ४९ मिनेट पहिले
मेलम्ची क्षेत्रमा उद्धारका लागि अखिल र युवा संघको टोली परिचालन ५१ मिनेट पहिले
उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई एक साता थप्ने तयारी २ हप्ता पहिले
कोरोनाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित ४ हप्ता पहिले
मोदीले नोभेम्बरसम्म ८० करोड नागरिकलाई सित्तैमा खानेकुरा दिने १ हप्ता पहिले
असार १ गतेदेखि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी नआउने २ हप्ता पहिले
असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आज सार्वजनिक १२ महिना पहिले
पत्रकार शर्माको निधनको खबरले स्तब्ध छु ! १ वर्ष पहिले
आज पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन १ वर्ष पहिले
सायद तिम्रो मेरो माया बस्यो की ? २ महिना पहिले